'Ihlaya' eliyiqiniso ngoweChiefs oseyinjini yeqembu - Impempe
‘Ihlaya’ eliyiqiniso ngoweChiefs oseyinjini yeqembu
Kunehlaya ebelijikeleza ezinkundleni zokuxhumana kulezi zinsuku lapho bekufakwe khona isithombe sabadlali ababili abasebancane beKaizer Chiefs, oNkosingiphile Ngcobo noHappy Mashiane sihambisana nombhalo othi: ‘kanti zivulwa nini izikole, zaze zahlupha nazi izingane?’.
Yize lokhu kuwuteku nje lwabalandeli kwazise bobabili sebaphuma esikoleni, kodwa kunenhlese yeqiniso njengoba laba bafanyana kuyibo asebephenduke izethenjwa kuleli qembu laseNaturena kanti nepali abalibheki muva nje.
Laba bakhuthuzi abancane yibo abasophondweni lomkhankaso waMakhosi wokujika izinto, futhi bashaye amagoli amahle ngesikhathi bebhaxabula iTshakhuma Tsha Madzivhandila ngo 3-0 eThohoyandou ngoJanuwari 21.
Kumanje uNgcobo – owaziwa ngelikaMshini kozakwabo basebholeni – useshaye amagoli amathathu kanti uMashiane yena unamabili, futhi kusabhekwe lukhulu kubo njengoba sebengenile egiyeni futhi bebonakala sebesibambile isitayela sikaGavin Hunt.
Nokho ‘lamavele ayinkinga’ ahlulekile ukusiza iMpofana eKapa la ibambane khona neStellenbosch kuba ngu 0-0, emdlalweni weDStv Premiership okuseDanny Craven Stadium ngoMgqibelo.
“Umdlalo odlule bewunzima. Nokho uma ubheka isimo sonke, ngicabanga ukuthi sisenza kahle. Sidinga nje ukuqhubeka siyibambe ishisa ukuze siqoqe amaphuzu aphelele kuyo yonke imidlalo,” kubeka lo mfanyana oneminyaka engu-21 ozalwa eMgungundlovu kwi-website yaleli qembu laseNaturena.
“Kuwumsebenzi wami ukushaya amagoli nokuphasela ozakwethu ukuze bakore, ngakho ngihlale ngizama ukwenza okukodwa kwalokhu. Sijabule ngendlela izinto ezihambe ngayo kula maviki amabili. Wumsebenzi omuhle nesingakhela phezu kwawo.”
Umdlalo olandelayo kwiChiefs ngowamagqubu neqembu elabaphuca iqatha emlonyeni ngesizini edlule, iBaroka eyabaphuthisela ngesicoco seligi ngokubabamba ngo 1-1 emdlalweni wokugcina okwakumele Amakhosi awuwine ukuze abe ngompetha.
“Njengoba imidlalo ithothene futhi iza ngokushesha kanjena, kumele siqine ngokwengqondo bese siqinisekisa ukuthi sibalungele ngokuphelele. Sesibheke umdlalo olandelayo esizobhekana kuwo neBaroka, futhi siyazi ubaluleke kanjani lo mdlalo kithi,” kuphetha uNgcobo.
Previous Previous post: Sizokhishelwa umphakathi maduze isinqumo ngonompempe owancisha iCeltic igoli idlala neSundowns
Next Next post: Uzifanise noJesu oxoshwe yiLeopards nomlayezo ongacacile ‘osola’ othile abesondelene naye ngokumkhaphela